Hoditra tigra miaraka amin'ny Photoshop. | Famoronana an-tserasera
Hoditra tigra miaraka amin'ny Photoshop.
Laura Carro | | Graphic Design, sary, Photoshop
Andro tokony hanaovana fanovana hoditra. Samy ho an'ny tarehy, tànana na tongotsika, izay tianao indrindra. Ho an'ny tenantsika, na ho an'ny namana na mpianakavy. Androany dia mitondra an'ity fampianarana ity izahay mba hanana fotoana mahafinaritra manova ny mampiavaka ny hoditra.
Amin'ity tranga ity dia hampiasa ny hoditry ny tigra isika hanovana ny antsika, na araka ny efa noresahintsika, angamba ny an'ny namana. Aza adino anefa fa izany no izy toro-hevitra ho anao mba hamoronana; Mety ho ny hoditry ny bibilava, ny panda, na ny voankazo hafa, ankoatry ny hafa. Afaka manaraka ny diantsika izy ireo nefa tsy mila mampiasa ilay biby nofidintsika.
Ny zavatra voalohany dia ny fahazoana ireo sary izay tiana hampiasaina. Mety ho a sarinao, na an'ny namanao na havanao namonjy anao tamin'ny fihaonana. Ary avy eo dia maka tahaka ny singa ilaina: amin'ny tranga misy ny tigra.
Esorinay ny hafanam-po kely mba hahitana ny fomba fametrahana ny tigra amin'ny tarehy.
Amin'ity tranga ity, satria te-haka tahaka izahay faritra iray amin'ny hoditra fotsiny Raha apetaka amin'ny tarehy izany dia tsy mila manokana tsara amin'ny fomba sy ny toerana fametrahana ny tigra isika. Raha mbola misy sombina hoditra mifanaraka aminy dia tsara.
Misafidy ny ampahany amin'ny tarehy tiana ahatongavana amin'izany. taty aoriana Ctrl + Shift + I, na, ao amin'ny menio Selection, ny safidy Safidy mifamadika, hamafana ny sary sisa tsy hampiasainay.
El fusion mode Miankina amin'ny tena itiavanao azy io, hitantsika fa ny maody overlay dia hamela azy hamirapiratra kokoa, miaraka amin'ny rivotra mahafinaritra kokoa. Misafidy ny hampiasa ilay safidy izahay manambatra Multiply.
Finalmente izahay mamafa ny eraser manome kely fikitika farany amin'ny antsipiriany, mba hahazoana antoka fa tsy misy sisiny mahitsy na tsivalana izay niditra tao amin'ny toerana tsy tiantsika.
Raha vantany vao manana ny vokatra farany isika dia ho afaka hanana endrika vaovao, izay afaka mandeha manomboka amin'ny fanta-daza ka hatramin'ny zavatra tena misy zava-misy, arakaraka ny fomba fampifangaroana tianay hampiasaina; fa amin'ny farany ny hoditsika na ny sakaizantsika dia ho hafa mihitsy. Andramo izany!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Hoditra tigra miaraka amin'ny Photoshop.
Fanolorana lovia miaraka amin'ny Photoshop.
Mali, Banksy ary ny zebra izay itodihan'ny dian'izy ireo